Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Isiphithiphithi sokuhamba phesheya sityholwa yimigaqo-nkqubo karhulumente
Icandelo lokuhamba liye lacela imithetho ecacileyo kunye noncedo lwezemali kodwa le nto iye yawela ezindlebeni ezingevayo ngo-2020 nango-2021 - kufuneka sigcine uxinzelelo ukuya ku-2022 ukuqinisekisa ukuba urhulumente wase-UK, kunye nabalingane bakhe kwihlabathi jikelele bayawuva umyalezo wethu. kunye nokunikezela ngomthetho oza kuxhasa ukuchacha kwethu.
Abasixhenxe kwabalishumi eBritane bathi urhulumente unetyala lombhodamo ojikeleze ukuhamba phesheya ngexesha lo bhubhani, ngokophando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-10 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Uvavanyo lwabathengi abali-1,000 lufumanise ukuba isiqingatha sityhola urhulumente kuphela, ngelixa esinye kwisihlanu (22%) sityhola urhulumente kunye neshishini lezokhenketho.
Esinye isihlanu sathi ukubhideka akulotyala likarhulumente okanye ishishini lokuhamba - kwaye i-6% nje yatyhola ishishini lokuhamba, ityhila iNgxelo yoShishino lweWTM.
Iziphumo ziza emva kweenyanga ezili-18 zophazamiseko olungazange lubonwe ngaphambili lokuhamba kwihlabathi liphela njengoko ubhubhani we-Covid-19 uthatha ubhubhane.
E-UK, urhulumente wavala uhambo lwamazwe aphesheya ngoMatshi ka-2020, kunye nokucuthwa kwezithintelo ehlotyeni ngo-2020. Ukuvalwa okuthe kratya kwamiselwa njengoko iimeko zenyuka ekwindla - emva koko uhambo olulinganiselweyo lwaphesheya luye lwavunyelwa kwakhona ukusuka ngoMeyi ka-2021, ngokwaziswa kwetrafikhi ephikisanayo. inkqubo yokukhanya.
Ngaphandle kokuqhubela phambili ngenkqubo yogonyo ukusuka ngoDisemba ka-2020, i-UK ayizange ibone iimarike zayo zokuhamba zamazwe ngamazwe zivuleleka ukuya kuthi ga kubamelwane bayo baseYurophu, njengoko iindleko zovavanyo lwe-PCR kunye nesaziso esifutshane sotshintsho kuluhlu lwetrafikhi luthintele abathengi.
Abenzi beeholide kwiindawo ezifana nePortugal, iFransi kunye neMexico bajongana nomkrwelo wokubuyela e-UK ukunqanda iimfuno ezinyanzelekileyo zokuvalelwa bodwa- okuthetha ukuba abathengi abaninzi bakhethe indawo yokuhlala okanye bangabi nazo iiholide kwaphela.
Ngeli xesha, iiarhente zokuhamba, abakhenkethi, iinqwelomoya kunye nabanye kwishishini lokuhamba baye bakhankasela ngokungakhathali ukuba urhulumente azise ukuqalisa kwakhona okunentsingiselo kuhambo lwamazwe aphesheya-nangona uninzi ngoku luhlupheke kwiihlobo ezimbini zokurhweba olulahlekileyo kwaye lujongene nomlo wokusinda ngo-2022.
Oku kubhideka kwaphinda kwabangelwa sisibakala sokuba amazwe aphantsi kolawulo lwawo ayenembopheleleko ngemithetho yawo. Kwathetha, umzekelo, ukuba abahambi baseScotland nabaseWales babethintelwe ixesha elininzi lehlobo lika-2021 kumboneleli nje omnye wovavanyo lwe-PCR Covid-19.
Uphononongo lwabathengi lufumanise ukuba ipesenti ephezulu yabantu baseScots (57%) batyhola urhulumente wabo yedwa ngoqhushululu.
USimon Press, i-WTM yaseLondon, uMlawuli weMiboniso, uthe: “Ihlobo lesibini lobhubhani labona abantu baseBritane benyamezele elinye ixesha lemithetho edidayo, eguquguqukayo kunye nentsonkothileyo yokuhamba phesheya, ngoko ayimangalisi into yokuba ukubhukisha kuhlala kungaphantsi kwamanqanaba angaphambi kweCovid. .
"Ihlobo lesibini elilahlekileyo, ngaphandle kwenkxaso yecandelo elithile lee-arhente, abaqhubi kunye neenqwelo-moya, kuthetha ukuba kobu busika kuya kubona ukungaphumeleli kwezoshishino kunye nokulahlekelwa kwemisebenzi.
"Ngamaxesha aqhelekileyo, ukuhamba okuphuma ngaphandle kunika i-£ 37.1 yezigidigidi kwixabiso elipheleleyo (i-GVA) kuqoqosho lwase-UK kunye nokugcina imisebenzi ye-221,000 yase-UK - inani elikhulu kuneshishini lensimbi yaseBritani.
"Icandelo lokuhamba liye lacela imithetho ecacileyo kunye noncedo lwezemali kodwa le nto iye yawela ezindlebeni ezingevayo ngo-2020 nango-2021 - kufuneka sigcine uxinzelelo ukuya ku-2022 ukuqinisekisa ukuba urhulumente wase-UK, kunye nabalingane bakhe kwihlabathi jikelele bayasiva. umyalezo kwaye uhambise umthetho oza kuxhasa ukuchacha kwethu. ”
Ziziphi izihloko zam zebhajethi yeblogi - Isingeniso kwi-Multimedia Journalism uthi:
Novemba 13, 2021 kwi-10: 13
[…] Iindaba:Isiphithiphithi sokuhamba phesheya sityholwa ngemigaqo-nkqubo karhulumente (eturbonews.com) […]